Koush dia manambara ny fitaratra sy ny inkwire maimaimpoana amin'ny fampiasana tsy ara-barotra | Androidsis
Koush dia nanambara ny vidiny farany ho an'ny fitaratra sy ravina maimaimpoana ho an'ny fampiasana tsy ara-barotra
Koush dia iray amin'ireo mpamorona Android malaza indrindra ary ny fampiharana azy dia nanampy anay handinika traikefa hafa tamin'ny alàlan'ny fitaovana Android. Fanandramana izay mifanalavitra lavitra amin'ny atolotra amin'ny rafitra fiasa hafa toy ny Apple's iOS na Microsoft Windows 10 Mobile.
Izao dia rehefa nanapa-kevitra i Koush fa tokony handoa ny roa amin'ny fampiharana azy ny tsirairay ary ara-dalàna izany aotra euro, na dia misy maningana aza ny iray hafa. Azonao atao ny manohy mampiasa ny fampiharana Inkwire vaovao anao sy ilay Mirror taloha hanoratana maimaim-poana ny efijeryo. Na dia eny aza, maimaim-poana ireo fiasa vaovao an'ny Mirror raha tsy mampaninona anao ny manana ireo fari-drano amin'ny zavatra noraketinao.
tariby ranomainty, fampiharana iray noresahintsika roa volana lasa izay, dia efa namakivaky ny Play Store herinandro vitsivitsy lasa izay, saingy tsy navoaka saika amin'ny fomba ofisialy amin'ity andro ity. Ankehitriny dia azo lazaina fa azon'ny rehetra ampiasaina amin'ny fivarotana Android sy fivarotana lalao video ity.
Ny zavatra tsara momba ity fampiharana ity dia mamela azy io fanampiana lavitra nanamora ny alàlan'ny famelana anao hifehy ny efijery misy fitaovana hafa ary mifampiresaka aza. Nanapa-kevitra i Koush fa hanafaka maimaimpoana ny Inkwire amin'ny fampiasana tsy ara-barotra, saingy manana ny zony hanova azy raha toa ka miakatra ny sandan'ny server.
Ny fanovana ny Mirror dia tena zava-dehibe ihany koa. Hatramin'ny fanavaozana farany dia manana ny Mirror Encoding GIF, firaketana an-tsary sy fitaratra an-tsary an'ireo fitaovana amin'ny tambajotra. Raha hamaha ireo fiasa ireo raha tsy misy ny mari-drano dia mila mamoaka euro 3,19 vitsivitsy ianao ho an'ny GIF, € 5,19 ho an'ny fitaratra amin'ireo mpandray AllCast, € 5,19 ho an'ny fitaratra amin'ny Apple TV ary € 10,99 hanalana ny rindranasa rehetra. Mila Android Lollipop na avo kokoa ianao raha te hampiasa ity fampiharana lehibe ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Koush dia nanambara ny vidiny farany ho an'ny fitaratra sy ravina maimaimpoana ho an'ny fampiasana tsy ara-barotra
[APK] Chrome 54 beta manampy pejy vaovao vakizoro, famerenana horonantsary ambadika ary maro hafa